Haweeneydan oo lagu magacaabo Samia ayaa shalay barteeda Twitter-ka ku shaacisay in iskuul ku yaal Imaaraadku uu markii hore u soo bandhigay jago ay ugu yeertay “riyadii run u rumowday”. Qeybta shaqaalaha ayaa markaa la xiriirtay iyada, si kastaba ha noqotee, waxayna ku wargalisay in dowladda aysan siin doonin fiiso shaqo iyo in laga noqday dalabkeedii.
Waxay sheegatay qowmiyadeeda inay tahay waxa go’aaminaya diidmada, iyadoo ku andacoonaysa: “Sababtoo ah waxaan ahay isir Soomaaliyeed, inkasta oo aan ku dhashay kuna koray Ingiriiska, hadana Imaaraadku ima siin doono fiiso shaqo.”
Shaashadda shaashadaha emayllada ee ay soo dhigto, oo ay ku muujineyso walaaceeda midab takoorka, iskuulka iyo kaaliyaha macallinka ma aysan diidin in sababtu tahay dhaqankeeda Soomaaliyeed.
“Runtii anigu ma rumaysan karo in [Imaaraadku] uusan ii oggolaanaynin inaan fiiso helo sababo la xiriira isirkayga Soomaaliyeed,” ayay tiri. “Ma jiro qof xitaa dafiraya sababta ay u tahay cunsuriyada. Waxay yiraahdeen waa wax laga xumaado. Waxba si cad ugama qaban karaan.”
Bishii Nofeembar, Imaaraadku wuxuu joojiyay fiisooyinka la siiyo muwaadiniinta Soomaaliya iyo 12 dal oo kale.
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraatka ayaa si aad ah u xumaa sanadihii la soo dhaafay, iyadoo Muqdisho sanadkii 2018 ay diiday heshiis deked ah oo u dhaxeeyay Imaaraatka iyo iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida Somaliland oo ay sheegatay inay ku xadgudubtay madaxbanaanideeda.
Mas’uuliyiinta Soomaaliya ayaa markaa la sheegay inay xireen shabakad basaasnimo Imaaraat ah oo ka shaqeyneysay dalka sanadii 2019. Bishii Juun ee sanadkii hore, Muqdisho waxay sidoo kale diiday dalab ka yimid Abu Dhabi oo ahaa in dib loo furo Isbitaalka Sheikh Zayed – kaas oo u fidiyay daryeel caafimaad oo bilaash ah Soomaalida ilaa uu ka xirmayo 2018 – in soo noqoshada Soomaaliya oo ku biiraya dagaalka Yemen.
Arrintii ugu dambeysay ee xiisadaha ayaa dhacday laba bilood ka hor, markii ay Soomaaliya ku eedeysay Imaaraatka in uu dhiirrigelinayo xasillooni darro ka dhacda dalka gudaheeda isla markaana uu yaso dowladdiisa.